အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ကဘာလဲ။ | Martech Zone
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့အိုင်ပီအိုင်အက်စ်ထွက်ပေါ်လာပြီ။ အောင်မြင်မှုရှိ၊ မရှိနှင့် Facebook သုံးစွဲသူများအတွက်အနာဂတ်မည်သို့ဖြစ်မည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဘလော့စ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ထင်မြင်ချက်များမများပါ။ မင်းရဲ့အတွေးတွေကပဲ Facebook ပဲရှိနေပါပြီ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် $ 16 ဘီလီယံထမြောက်တော်မူ နှစ်ကြိမ်သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်စျေးနှုန်းမြှင့်ပြီးနောက် တတိယအကြီးဆုံး IPO.
Kuno ကို Creative မကြာသေးမီကပင် Facebook IPO နံပါတ်များကိုယူ။ နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူသူတို့ကို crunched Facebook ပေါ်မှာအင်တာနက်သုတေသနဒေတာ Pew ဆုံးဖြတ်ရန် Facebook သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့တကယ့်တန်ဖိုး.
Tags: Facebook ကfacebook ပန်ကာfacebook ipo ပါမိတျဆှေIPOစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographicsအဘိုး